Sida loo siiyo sawiradaada saameynta Instagram | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | General, Sawirro
Sawiradu waa a saldhig macluumaad yar waqti, goob ama goob. Waxaa loo maleynayaa in tan iyo 1826 (Taariikhda la rumeysan yahay inay ahayd laga qaaday sawirkii ugu horreeyay adduunka), Kaamirooyinka ayaa noo ogolaaday inaan sii noolaano daqiiqadahaas muhiimka u ah nolosheena.
Sidoo kale, waxaan markhaati ka nahay sida ay kamaradaha ugu dambeyntii u soo ifbaxeen sanadihii la soo dhaafay waana tan maanta, waa suurtagal qabato sawir leh boqolleyo badan oo taleefannada gacanta ah, ka dib markii la ogaaday in wixii waqtiyadii la soo dhaafay ku lug lahaa dadaal weyn, maanta, ay kaliya tahay arrin in yar la qoro, diirada la saaro oo la riixo ikhtiyaarka "Sawir Qaad".
1 Sii sawirradaada saamaynta caanka ah ee 'Instagram'
2 Sawirka Tifatiraha Sawirka
3 Tifatiraha Heerka Wix
4 Qalabka naqshadeynta internetka
Sii sawirradaada saamaynta caanka ah ee 'Instagram'
Sidaa darteed, sawirada maanta ayaa ka mid ah beddelaadyo badan oo tiknoolajiyaddu na siisay, si sidan ah oo aysan u baahnayn dadaal badan in la qaado sawir.
Isla macnahaas, waa suurtagal hel mashaariicda naqshadeynta garaafka iyada oo aan marka hore la dhammaystirin daraasado taxane ah ama koorsooyin diyaarin ah, oo ah wax soo kordhay oo dad, ama xiisaha ama sababo jira awgood, ay u suurtagashay inay helaan qalabkii lagama maarmaanka u ahaa inay awood u yeeshaan wax ka beddel sawirrada qaarkood.
Laga soo bilaabo qodobkan ugu dambeeya, qodobkan ayaa wax bari doona talooyin wax ku ool ah inay siin karaan adeegsadaha bedel lagu dabaqo saameynta Instagram sawirradiisa waxayna u muuqataa in saameyntan si weyn looga qiimeeyay adduunka rinjiyeynta.
Saamaynta 'Instagram' ayaa ah tan lakabyada nuances inaan codsan karno sawirradeenna mar alla markii la qabto oo aan qarka u saaran nahay inaan u soo dhigno Instagram-ka.
Dhibaatadu waxay soo ifbaxaysaa xilligan aan ogaanno taas Suuragal ma ahan in lagu dabakho saameyntan wixii ka baxsan App-ka, taas oo dad badan ku reebtay fekerka ah inay ku dabakhi karaan saameyntan soo jiidashada leh sawirradooda.
Raaxada akhristaha iyo dhammaan kuwa ku cusub qaybta daabacaadda, waxaa muhiim noqon doonta in la ogaado in ay suurtagal tahay in la helo saamaynta instagram iyada oo loo marayo barnaamijyo badan oo tafatirka muuqaalka ah, habkaas oo ay macquul tahay in lagu dabakho saameyntaan dhammaan sawirada aan dooneyno
Dareenkaas, softwaresyada qaar ee aan u adeegsan karno inaan ku helno saameyntaan waa:
Sawirka Tifatiraha Sawirka
Isticmaalayaasha Wix, ikhtiyaar u Tifatiraha sawirka App, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fudud ee barnaamijkan. Sidaa darteed, codsigani waa mid aad u fudud, habkaas oo qof waliba u isticmaali karo qalabkan inuu ku saxo sawirradooda.
Tifatiraha Heerka Wix
Barxadda Wix waxay na siisaa a lacag la'aan ah oo aad u software is haysta, taas oo noo ogolaaneysa inaan ka doorano tiro badan oo xulashooyin ah sawiradeena, gudaheeda oo aan ku dooran karno noocyo kala duwan oo lakabyo ah iyo midabyo soo jiidan kara aragti weyn oo ku saabsan sawiradeena.
Qalabka naqshadeynta internetka
Waxaa jira dad badan qalab maanta aan ka heli karno shabakadda. Naqshadeynta ayaa ah mid ka mid ah xulashooyinka aan ka heli karno wax badan oo internetka ah, waana sababta ay suurtogal u tahay in la abuuro mashaariicdeena sawirada iyadoo aan xitaa loo baahnayn in laga soo dejisto wax kombuyuutar kombuyuutarkeena ah. Dareenkan, isticmaaluhu waa inuu kala doortaa midka barnaamijka ku habboon doorbidkaaga.
Este software caan ah kama dambayn oo waxay ka mid tahay shaqooyinkeeda badan, tafatirka iyo abuurista lakabyada waxay noo ogolaaneysaa inaan ku qaadno wax ka beddelka sawirradeenna illaa heer ay suurtagal tahay in la soo saaro lakabka aan raadineyno ama saameynta 'Instagram'.
Waxaa jira qalab badan oo maanta noo oggolaanaya inaan soo saarno saameyntan, iyo sidoo kale kuwa kale lakabyo xitaa soo jiidan kara dhamaan sawiradeena dhijitaalka ah.
Maxaad sugeysaa Baadhitaan ku samee oo tijaabi qalabka ku habboon baahiyahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo siiyo sawirradaada saamaynta Instagram
Ku hagaaji shabakadda bulshada ee ugu weyn abuurista Adobe
U diyaarso boodhadh sax ah si aad u gaadho dhagaystayaal aad u tiro badan